Naqshaddii ay soo bandhigeen golaha maxaakiimta iyo warka Xuseen Caydiid oo la sheegay in ay iswaafaqaya. iyo Qarax xalay ka dhacay xarunta CID-da magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada Itoobiya iyo cabdsi xoogan oo soo food saartay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Ruunkinet 05/01/06
Qarax aan la ogeyn cidda soo tuurtay ayaa xalay ka dhacay xarunti CID-da ee magaalada Muqdisho.
Xaruntan oo u ah saldhig ciidamada Itoobiya ee ku soo duulay Soomaaliya ayaan la ogeyn cidda ku wax yeelowday.
Qaranxan oo laga maqlayay meelo badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ah digniin loo diraya ciidamada Itoobiya ee doonaya in ay hubka ka dhigaan meelo gaar ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Ciidamada Itoobiya ayaa dhawaan waxaa looga dilay agagaarka degmada Jilib 2 askari ayadoo halkaasi looga dhaawacay qaar kale.
Dad badan oo hubeysan oo isugu jira wadaaddo iyo qaar kale oo wadaniyiin ah ayaa la sheegay in ay doonaya in weerar gaadmo ah kula dagaalamaan ciidamada Itoobiya ee la filayo in ay ku fidaan dhammaan gobollada dalka.
Dhanka kale, warka ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xuseen Caydiid ayaa la sheegay in uu ka tarjumayo naqshad ay soo bandhigeen golaha maxaakiimta inta aan looga xoog roonaan dagaalka ay la galeen ciidamada Itoobiya.
Naqshadan ayaa sheegaysay in dalka Soomaaliya lagu daro dalka Itoobiya ayadoo uu Xuseen Caydiid sidaasi xaqiijiyay.
Sidoo kale, mar su'aalo laga weydiiyay wasiirka arrimaha dibaada ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu Xuseen Caydiid afka ka xasay warkaasi taasoo ay dad badani u qaateen in ay arrintaasi sir ahayd ee uu Xuseen Caydiid ku fududaaday.